Nagu saabsan - Wenzhou Cavoli Sanitary Ware Co., Ltd.
Bar shukumaan dhaqaaq ah
Hayaha Qalajiyaha Timaha
Musqusha Hayaha Musqusha
Waxaan haysanaa in kabadan 15 sano oo ah musqusha alaabada khibrada soosaarida
WENZHOU CAVOLI SANITARY WARE CO., LTD waa mid ka mid ah shirkada soo saaraha musqusha iyo dhoofinta magaalada Wenzhou mudo ka badan 15 sano. Waxaan u dhisnaa sida warshad in 2005, kaliya diiradda on soo saarida.Later, shirkadda CAVOLI ka diiwaan gashan 2010 year.With horumar joogto ah, aagga warshad ku saabsan yahay 7000 m2, in ka badan 80 ka shaqeeya warshadaha.
Qalabkayaga kala duwan ee ugu muhiimsan waa Zinc Alloy, Brass & 304SS oo leh midabyo kala duwan oo midabo leh (Chrome, Nickel cadayasho, madow, Orb iyo wixii la mid ah) .Kumanaan qaab iyo naqshad kala duwan leh oo lagu heli karo musqusha oo buuxiya dhammaan baahiyaha macaamiisha adduunka.
Sida soo saare xirfadle ah, waxaan soo saari karnaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha, kooxda OEM & ODM.CAVOLI waxay xooga saarayaan maareynta wax ku oolka ah iyo xakamaynta tayada sare ee wax soo saarka maalinlaha ah. "Raadso Tayada Sare, Macaamiisha Koowaad" waa ujeedkeenna. Sidoo kale, waxaan leenahay awood adag oo ku saabsan qaabeynta iyo horumarinta alaabooyin cusub iyadoo la raacayo dhadhanka suuqa iyo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
CAVOLI soo maray xisaab hubinta iyo leedahay ISO9001, CE iyo ROHS, iskaashi la supermarketwith American .Mainly dhoofiso 90% wax soo saarka our iyo kaliya 10% wax soo saarka dalka gudihiisa. Ku dhowaad u dhoofiyaan dhammaan erayga iyo suuqa ugu weyn waa North America, South America Europe iyo Mid Macaamiishayada ugu weyn waa Eastmarket, jumladleyaal iyo milkiile summad leh.
Shirkaddayadu waxay kordhisaa isticmaalka heerarka qaranka iyo warshadaha, waxay si adag u xakameysaa geeddi-socod kasta, waxay dammaanad qaadaysaa tayada qayb kasta. Ka dib marka qalabku u jilco macaamilkeenna, waxaan samayn doonnaa sahan buuxa oo ku saabsan waxqabadka qalabkeenna, ka dibna waxaan horumarin doonnaa tikniyoolajiyadeena iyo tayadeena. Shirkaddu waa tan ugu weyn uguna nidaamka dhammaystiran ee ka shaqaynta gobolka Zhejiang.
Shirkaddeenu waxay leedahay noocyo qalabka mashiinnada saxda ah ah .. Iyo sidoo kale koox farsamo sare leh, in ka badan 80 shaqaale ah. Waxay isku dayi doonaan intii karaankooda ah inay alaab wanaagsan u soo saaraan macaamilkeenna. 24h adeegyada iibka kadib Shaqaalaheena ayaa kula soo xiriiri doona si ay u xaliyaan dhibaatooyinkaaga waqtiga ugu horeeya.
Waxaan sugeynaa inaan ka helno baaritaan adiga ah waxaanna noqonay shirkad weyn oo wax soo saare ka ah Shiinaha oo leh tayo wanaagsan qiimaha tartamada!